Beesha Caalamka oo la shirtay Deni iyo Axmed Madoobe - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Beesha Caalamka oo la shirtay Deni iyo Axmed Madoobe
Beesha Caalamka oo la shirtay Deni iyo Axmed Madoobe
Muqdisho (Walwaal.com)- Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa xalay kulan wadajir ah la yeeshay wakiillada Beesha Caalamka ee ku sugan Muqdisho, sida lagu shaaciyey qoraalo ay baahiyeen dhinacyadu.
Kulankas ay wakiillada beesha caalamku xalay la yeesheen madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku soo aaday saacado kadib markii ay xubanaha beesha caalamku shir kale la yeesheen Ra’iisul Waasaaraha xukuumadda xilka sii-hayaha Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiskiisa ku qaabilay.
Markii uu soo dhamaaday kulankii R/Wasaare Rooble iyo beesha caalamka ayaa qoraal uu baahiyey xafiiska Rooble waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen dardar gelinta iyo dhammeystirka arrimaha doorashooyinka dalka, si waafaqsan heshiiskii 17-kii September 2020 iyo soo jeedintii guddigii farsamada ee Baydhaba.
Previous articleKooxda Al-Shabaab oo war kasoo saaray tallaalka la keenay Soomaaliya?
Next articleMadasha Badbaado Qaran oo war culus kasoo saartay mudo kororsi dhaca digniina u dirtay Gudoomiye Mursal